Lehilahy Sinoa - Sinoa Ankizilahy - Sinoa Ry Zalahy
Lehilahy Sinoa — Sinoa Ankizilahy — Sinoa Ry Zalahy
Isika amin’izao fotoana izao miaina ao Shina fa matetika no mitsidika Manila. Isika dia mitady ny mahafinaritra sy ny fahafinaretana ny ankizivavy tao Manila mba mifanerasera aminy isika rehefa mitsidika. Ny olona iray izay manampy ahy ho ny nikapoka ny dikan ny tenako aho. Iza no afaka manampy ahy mba hahatratra ny tena mety raha tsy misy manery ahy.
Namana tsara indrindra lasa tia
ny tsara vady dia iray izay gregarious, aina ao aminy ny vatana sy ny hatsaran-tarehy mamirapiratra avy ao anaty, avy ao am-pony. Vonona ny fitiavana sy vonona ny handray ny fitiavana ao hiverina. Manantena aho bebe kokoa ny zava-dehibe izay isika hifandray handresy.
Tsy izaho avy any shina, fa amin’izao fotoana izao miaina eto
Izaho mankafy mahita ny toerana vaovao, olona vaovao, ary ny vaovao sakafo. Izaho no mahafinaritra ho manodidina ny Fitiavana Mifoha ara-dalàna Shinoa mampiaraka asa fanompoana izay afaka hihaona sy ny daty lehilahy tokan-tena. Lasa mpikambana ao amin’ny Fitiavana mifohaza ianao hahazo ny tena fahafahana mivory tsara tarehy ry zalahy mitady ho tokana ny vavy avy amin’ny manerana izao tontolo izao. Ny fivorian’ny mpikambana rehetra Tia mifoha tranonkala maimaim-poana tanteraka. Hanatevin-daharana ny fiarahana amin’ny fiaraha-monina sy manampy ny mombamomba azy, ny fikarohana ny alalan ny sary catalog ny zazalahy manokana ny dokam-barotra toy ny mitady anao noho ny fiarahana amin’ny aterineto, olon-tiany sy ny fitiavana ao Shina
← Chongqing, Shina, Izay Hihaona Ankizivavy Iray Mans Travel
Hitsena anay ny Tapaka ny Tetezana tamin'ny taona: Shinoa zazavavy noraisin'ny Amerikana dia mampivondrona amin'ny ray aman-dreny niteraka, Shina - Baovao Asia Iray →